घर जग्गा व्यवसाय संकटमा ! कसरी ? | Arthatantra.com
घर जग्गा व्यवसाय संकटमा ! कसरी ?
काठमाडौं । बजारमा तरलता अभावसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएपछि घरजग्गा व्यवसाय संकटमा परेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सेयर, घरजग्गा र अटो लोनमा कटौती गर्न बैैकरलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रित गरिएको घर जग्गा कर्जा, मार्जिन लेण्डिङ र अटो लोनमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारण ‘घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । पहिले रियलस्टेटको कर्जामा सिमा तोक्दा मन्दि आयो । पछि मन्दिको असर सकिनै लाग्दा भूकम्प आयो र त्यसले पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्टबारे नकारात्मक असर गर्यो । पछि पुननिर्माण गरेर बेच्ने बेलामा कर्जामा कटौती गरियो र ब्याज वृद्धि भयो, यतिबेला घरजग्गा व्यवसाय चरम संकटमा छ’, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति तथा घर जग्गा व्यवसायी ओमराज भण्डारीले पनि तरलताका नाममा घर जग्गाको ऋणमा कटौतीसँगै व्यवसाय संकट उन्मुख रहेको बताए । ‘शहरी क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम मूल्यका घर पाइँदैनन्, एक करोडमा घर किन्न आउने मान्छे कसैसँग पनि नगद हुन्न । सबैले बैंकबाट ऋण लिने हो । बैंकले ऋण नियन्त्रण र व्याज वृद्धि गरेपछि घर बिक्रि घट्छ’, उनले भने ।
Hari Datta Rokaya
it is best planning of Nepal Rastra Bank.com
अब सहकारीले पनि हाउजिङको व्यवसाय गर्न पाउने काठमाण्डौं । अब सहकारी संस्थाहरुले पनि हाउजिङ वा एकीकृत बस्तीको विकास गरी बिक्री गर्न […]
बुढीगण्डकी प्रभावितले मुआब्जा पाउन थाले, रोपनीको ८ लाख ३५ हजारसम्म काठमाण्डौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आयोजना प्रभावितहरुलाई मुआब्जा लिन […]
घरजग्गाको कारोबार घट्ने निश्चितः राष्ट्र बैंकद्धारा कारोबारमा कडाई गर्ने संकेत ! काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा […]